We Fight We Win. -- " More than Media ": ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကြံဖွတ်ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်လေးဖြူ
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကြံဖွတ်ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်လေးဖြူ
Envoy ဂျာနယ်အတွဲ(၂) အမှတ်(၄၉)မှာ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များရဲ့ ဧပြီ(၁)ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မည့်သည့်ပါတီမဲပေးမည်ကို မေးမြန်းရာတွင် နာမည်ကြီးအဆိုတော် လေးဖြူသည် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကြံ့ဖွတ်ပါတီကို မဲပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် ယခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးမည်ဆိုတာ မစဉ်းစားသေးကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာဝိုင်းနှင့်စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ကတော့ အမေစုရဲ့ NLD ပါတီမဲပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Envoy ဂျာနယ်သည် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ခေတ်ကောင်းစဉ်အခါက မြှောက်စားခံရပြီး ရုပ်ရှင်လောကတွင် ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်လာခဲ့သော ဇင်ယော်မောင်မောင်ထုတ်ဝေသောဂျာနယ်တစောင်ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာဇင်ယော်မောင်သည် စစ်အစိုးရအတွက်ဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားပေါင်းများရိုက်ကူးခဲ့သူတဦးဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ခင်ညွှန်ပြန်လည်လွှတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းဂါရဝပြုကျေးဇူးဆပ်သူတွေထဲမှတဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ဦးခင်ညွှန့်နှင့်ပုဂံမှာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတဲ့ဇင်ယော်မောင်မောင်။
ခွေးမသား ငါတော့မင်ကိုအထင်ကြီးလို နာမည်
ရေရှည်ရပ်တည်း နေတာဘာကြောင့် သံသရဖြစ်ခဲဘူးတယ် အော်နောက်ဆုံတော
Your regime is over, killed monks, students,people and workers.All people, they don't want to see your face in Media picture that you want to know. How could you show up and work for your people,but they don't trust and believe you ever. Next your turn coming true into the hell. Pls call and pick up Zin Yaw Mg Mg together with you.